Wednesday June, 20 2018 - 00:58:06
Sunday January 07, 2018 - 12:54:37 in by salman abdi
Waxaa la fahamsan yahay in Liverpool ay raadin doonto badalka Philipep Coutinho oo aduun dhan 160 Malyan oo Euro ugu biiray kooxda Barcelona, waxaana soo baxaya warar is khilaafsan oo ku saabsan iney durba raadisay Riyad Mahrez.
Wararka xanta ah waa kuwa ugu weyn ee mar walba la baahiyo inta uu furan yahay suqua kala iibsiga ciayartoyda, basle markaan hillinada beIN Sport iyo Sky Sports ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda Riyad Mahrez ee Liverpool.
Liverpool ayaa ku dhaw iney 49 Malyan oo Pound ku qaadato xidiga Leicester City Riyad Mahrez si uu badal buuxa ugu noqdo Philippe Coutinho oo aduun dhan 142 Malyan oo Pound ugu biiray koxda Blaugrana inkastoo wali aan lasoo bandhigin.
Liverpool waxey durba ka hawlgashay arinta Riyad Mahrez iyadoo bixin doonta aduun dhan 55 Malyan oo Euro oo u dhiganta 49 Malyan oo Pound si ay u hesho xidiga reer Algeria ee khibradda fiican u heysta horyaalka Premier League
Warbixinada uu helay hillinka BeIN Sports waxey sheegayaan inuu maanta oo Axad ah mari doono caafimaadka isla markaana uu kula heshiiyay Reds Afar sano iyo bar.
Warbixinta Sky Sports:
Sky Spots waxaa loo sheegay in Liverpool aysan wax xiiso ah u qabin Riyad Mahrez si uu badal ugu noqdo Philippe Coutinho.
Waxaa jira warar soo jeedinaya inuu Mahrez u dhawyahay Reds, balse waxaa naloo sheegay ineysan jirin wax xiriir ah oo dhexmaray Leicester City iyo Liverpool.
Jurgen Klopp wuxuu ku jiraa suuqa si uu u helo hal abuure fiican oo badala Coutinho, xidigo kale ayuuna maanka ku hayaa.
Leicester City sidoo kale waxey dooneysaa lacago ka badan 50 Malyan oo Pound